चीनले उमार्‍यो चन्द्रमामा कपास, अब आलु पनि उमार्ने
काठमाडौं । चीनले चन्द्रमामा कपासको बिउ उमार्न सफलता पाएको छ । चीनले पठाएको रोभर छाङई–४ मा कपासको बिउ उम्रेको हो । चन्द्रमामा कुनै बिरुवा उम्रेको यो पहिलोपटक हो । वैज्ञानिकहरूले मंगलवार..
कास्की । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले समृद्ध नेपाल निर्माणको प्रमुख आधार पर्यटन क्षेत्र भएको बताएका छन् । पोखरा बुद्धचोकमा खुलेको होटल टास्क इन्टरनेशनलको बुधबार उद्घाटन गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले सरकारले पर्यटन, कृषि,..
एनआइसी एशियाको प्रगतिमा छलाङ, प्रति शेयर आम्दानी ३४ रुपैयाँ पुग्यो
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा उत्साहजनक प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले ६ महिनाको अवधिमा नै एक अर्ब ५१ करोड खुद नाफा कमाएकोे छ । बैंकले..
सहायक रजिष्टार एक लाख घुस सहित पक्राउ
काठमाडौं । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरकी सहायक रजिष्टार गीता कुमारी पन्थी एक लाख घुस सहित अख्तियारको फन्दामा परेकी छिन । दर्ता रहेको स्कुलको हालसम्म बाँकी रहेको कर तिर्न जाँदा राजश्व रकम..
गलेश्वर । माघेसङ्क्रान्ति तरुल, सखरखण्ड, चाकु, खिचडी र कन्दमूल खाएर मनाइने पर्व हो। पछिल्लो समय म्याग्दीका ग्रामीण क्षेत्रमा तरुल र कन्दमूल पाइन छोडेपछि गाउँलेले ब्रोइलर कुखुराको मासु र भात खाएर..
‘१० वर्षमा मुलुक समृद्ध बनाउने अभियानको नेतृत्व गर्छु’
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अबको १० वर्र्ष मुलुकलाई समृद्धि बनाउने अभियानको नेतृत्व आफूले गर्ने बताएका छन् । देशभक्त गणतान्त्रिक मञ्चले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना..
आफ्नो एनजीओलाई नछानेको भन्दै मन्त्रीले कुटे सचिव, सचिव उल्टै प्रहरी नियन्त्रणमा
काठमाडौं । प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले मन्त्रालयका सचिवमाथि हातपात गरेका छन् । मन्त्री यादवले उद्योग वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विद्यानाथ झालाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर..
अमेरिकी इतिहासकै सबैभन्दा लामो शटडाउन
एजेन्सी । अमेरिकामा जारी आंशिक शटडाउन शुक्रवार मध्यरातदेखि २२औं दिनमा प्रवेश गरेको छ । अमेरिकी इतिहासमा यो हालसम्मको सबैभन्दा लामो शटडाउन हो । मानिसहरु आफ्नो खर्च चलाउनका लागि घरको सामान..
डेढ वर्षअघि रोक लगाएको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा
काठमाडौं । सरकारले डेढ वर्षअघि रोक लगाएको जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गरेको छ । सम्बन्धित स्थानीय तहले खेतीयोग्य जग्गा होइन भनेर सिफारिस गरेपछि जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइने भूमि ब्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले जानकारी..
यातायात विभागका ५० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा
काठमाडौं । पचास प्रतिशतभन्दा बढि कर्मचारीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएपछि यातायात व्यवस्था विभागको कामकार्वाही ठप्प हुन पुगेको खुलासा भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक लावण्य ढकालले देशभरका यातायात..
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्य सञ्चालन आधुनिक लोकतान्त्रिक विधिअनुरुप अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै अधिकार सम्पन्न, समृद्ध र सुखी नागरिक नै राष्ट्रिय स्वाभिमानको आधार भएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले..
राष्ट्रपतिदेखि जनप्रतिनिधिसम्मका पदाधिकारी र कर्मचारीको नयाँ मर्यादाक्रम (सूचीसहित)
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका व्यक्तित्वहरुको मर्यादाक्रम तोकेको छ । मन्त्रिपरिषद्को हालैसम्पन्न बैठकले मर्यादाक्रमको टुंगो लगाएको छ । यसअघि मर्यादाक्रम तलमाथि परेको भन्दै प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले..
इलाम पुगेर शुरु गरे डा केसीले १६ औं अनसन, यस्ता छन् डा केसीका माग
काठमाडौं । डा गोविन्द केसीले १६ औं अनशन शुरु गरेका छन् । आफूसँग सहमति भए अनुसार चिकित्सा स्वास्थ्य विधयेक नआउने भएपछि डा। केसीले आफ्नो अनशन शुरु गरेका हुन् । आजै संसदको..
प्रधानमन्त्रीले संसदमा नढाटेको भन्दै अर्थमन्त्रीले यस्तो विज्ञप्ती निकाले
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रधानमन्त्रीको बचाउ गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिनअघि संसदमा तथ्यांक तोडमोड गर्दै कमजोर तथ्यांकलाई पनि बलियो देखाउन खोजेको भन्दै ब्यापक आलोचना..
अख्तियारद्वारा निगमका पूर्व कार्यकारी निर्देशक खड्काविरुद्ध १८ करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल आयल निगमका पूर्व कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काविरुद्ध भष्ट्राचार मुद्दा दायर गरेको छ । गैरकानूनी रुपमा १८ करोड ६६ लाख ५ हजार रुपैयाँ सम्पत्ति आर्जन..
रविन्द्र अधिकारीसहित दुई पूर्व मन्त्रीलाई कानून अनुसार कारवाही गर्न लेखाको निर्देशन
काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै बहालवाला पर्यटनमन्त्रीसहित दुई पूर्व पर्यटनमन्त्रीलाई कानून अनुसार कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा उपसमितिले पेश..
वाइडबडी प्रकरणमा मन्त्री अधिकारीले पत्रकार सम्मेलन गरी के के भने ?
काठमाडौं । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियामा आफ्नो कुनै किसिमको संलग्नता नरहेको जिकिर गरेका छन् । सोमवार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन..
महंगी घटेको छ, देश आर्थिक प्रगतितिर लम्किरहेको छ : प्रधानमन्त्री ओली
Posted on Jan 06 2019
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशमा महंगी घटेको दाबी गरेका छन्। उनले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष महंगी घटेको दाबी गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गत वर्ष ४..
‘सरकारले खोस्यो’ लोकसेवा आयोगको अधिकार
काठमाडौं । संवैधानिक अधिकार कटौती गरी कानुन संशोधन तयारीप्रति लोकसेवा आयोगका पदाधिकारी असन्तुष्ट बनेका छन्। लोकसेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा सरकारले प्रशासनिक र वित्तीय अधिकार कटौती गरेको अध्यक्ष..
२०७६ सालमा सार्बजनिक बिदाको दिन थप्दै सरकार, करिव १२ दिन थपिने
काठमाडौं। सरकारले २०७६ सालमा राष्ट्रिय बिदाहरु थप गर्ने भएको छ। २०७४ सालमा अति धेरै बिदा दिएको भन्दै ब्यापक आलोचना भएपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ का केही महत्वपूर्ण विदाहरुसमेत काटेको..
अब महिनैपिच्छे छोराछोरीको तलब बाबुआमाको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपने, नगरे कारबाही
काठमाडौं । सरकारले जेष्ठ नागरिकको सुरक्षा गर्न भन्दै छोराछोरीले कमाएको तलबको निश्चित प्रतिशत बाबुआमाको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने भएको छ । जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक..
रेशम चौधरीले लिए थारू भाषामा सपथ, सभामुखले लगाइदिए फूलमाला
काठमाडौं । कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित रेशम चौधरीले सांसदको सपथ लिएका छन्। सिंहदरबारस्थित आफ्नो कार्यालयमा दिउँसो ३ बजे सभामुख कृष्णबहादुर महराले चौधरीलाई सपथ खुवाएका हुन्। चौधरीले..
रेशम चौधरीको सपथप्रति कांग्रेसको आपत्ति, ‘केपी ओलीको रामराज्य यस्तै हुन्छ’: कांग्रेस प्रवक्ता
काठमाडौं । कैलालीको टीकापुर हत्या प्रकरणको पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राजपा नेपालका नेता रेशम चौधरीलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यको सपथ ग्रहण गराउन लागिएकोप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । कांग्रेस..
काठमाडौं । टीकापुर घटनामा मुख्य अभियुक्तको रुपमा थुनामा रहेको सांसद् रेशम चौधरीले आज सपथ लिने भएका छन् । सभामुख कृष्णबहादुर महराले बिहान साढे ११ बजे संसद् भवनमा चौधरीलाई पद तथा गोपनियताको..
वाइड बडी भ्रष्टाचारमा संलग्नताबारे अब बोल्दिनँः पर्यटनमन्त्री अधिकारी
काठमाडौं । पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले वाइड बडी जहाजमा आफ्नो संलग्नताबारे अहिले केही नबोल्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। भैरहवामा रहेका मन्त्री अधिकारीले भ्रष्टाचारमा उनको संलग्नता किटान गरिएपछि यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। ‘अहिले..
विमान चालक नै नक्कली, शैक्षिक प्रमणपत्र नक्कली भेटिएपछि ३ चालकसहित ५० कर्मचारी बर्खास्त
Posted on Jan 01 2019
इस्लामावाद । पाकिस्तान सरकारले पाकिस्तानको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक विमानका चालकसहित ५० जना कर्मचारीलाई बर्खास्त गरिएको छ । उनीहरुको शैक्षिक प्रमणपत्र नक्कली भेटिएकाले बर्खास्त गरिएको र बर्खास्त हुनेमध्ये तीन जना विमान चालक रहेको..
ससंद्‌मा प्रश्न उठ्यो– पुस १६ गते पानीजहाज कहाँबाट चल्न शुरू भयो प्रधानमन्त्रीको जवाफ चाहियो !
काठमाडौं । पुस १६ गतेबाट नेपालमा पानीजहाज चलाउने भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइलाई लिएर प्रतिपक्षी सांसदले सदनमा जवाफ माग गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको मंगलवार बसेको बैठकको शून्य समयमा नेमकिपाका..
सन् २०१८ मा विश्व चर्चित घटना के के भए ?
काठमाडौं । वर्ष सन् २०१८ मा पनि अमेरिकाको चर्चा र भूमिका धेरै देखियो भने अन्य देशका विभिन्न घटनाहरु पनि विश्वव्यापी भए। वर्षभरीका चर्चित मुख्य घटनाक्रमहरुको सूचीमा राजनीतिक घटनाहरु नै धेरै..
जब १० कक्षामा पुगेर मुख्यमन्त्रीले पढाए.........
लमही । बिहान १० बजेको थियो । अन्य दिनजस्तै आज पनि तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–७ मा रहेको मावि कालाखोलाका विद्यार्थी प्रार्थना गरिरहेका थिए । त्यतिबेला प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल, प्रदेशसभा..
दक्षिण कोरियाको निर्यात ६०० अर्ब डलर, इलेक्ट्रोनिक्स चिप्स मात्रै सय अर्ब डलर
Posted on Dec 30 2018
सियोल। दक्षिण कोरियाको सन् २०१८ को निर्यात ६०० अर्ब अमेरिकी डलर नाघेको छ । सरकारी तथ्यांकहरुका अनुसार दक्षिण कोरियाको यो निर्यात अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उच्च हो । व्यापार, उद्योग तथा ऊर्जा मन्त्रालयले..
Results 1994: You are at page 18 of 67